3 Arrimood oo ku saabsan Gabadhii la waayay Raq & Ruux ee u shaqen jirtay Sirdoonka Somalia - Idman news
3 Arrimood oo ku saabsan Gabadhii la waayay Raq & Ruux ee u shaqen jirtay Sirdoonka Somalia
Baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaaliya waxaa maalmahan qabsaday qeylo dhaan ku saabsan gabadh ka tirsaneyd hay’adda Nabad sugidda Qaranka Soomaaliya ee NISA, taasoo la waayay muddo hal bil ah ka hor.
Ikraan Tahliil Faarax ayaa sidoo soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho, markii uu xilka hayay Cabdiraxmaan Yariisoow oo lagu dilay qarax.
Xog rasmi ah lagama hayo halka ay ku maqan tahay gabadhan iyo waxa ay ku sugan tahay nolol iyo geeri toona, waxaana odayaasha beesheeda ay dowladda Soomaaliya ugu baaqeen inay meel ku sheegaan islamarkaana caddaalad la siiyo.
Haddaba si sharraxaad badan loo helo waxaan eegeynaa afar arrimood oo ku saabsan gabadhaas ay hadal heynta xooggan ka taagan tahay.
Wuxuu xildhibaanka ka digay dadka eedeymaha ku saabsan a xiriira sida ay Ikraan u maqan tahay ku faafinaya baraha bulshada.
Previous Ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa Daraawiishta Galmudug oo la wareegay fariisimo horleh
Next AMISOM oo soo bandhigtay ciidan ay u diyaarisay Amniga doorashooyinka dalka * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qarax ka dhacay dhisme ku yaalla Sweden oo khasaare badan sababay. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia